Olee otú iji tufuo nke otutu scars: agaghinihu tụrụ na ihu? – Woman in gold
Olee otú iji tufuo nke otutu scars: agaghinihu tụrụ na ihu?
Olee otú iji tufuo nke otutu site pope ngwa ngwa n'ụlọ
Scars na otutu scars mgbe
Esi wepụ ihe otutu scars na ihu
Olee otú ngwa ngwa tufuo etuto gị azụ n'ụlọ
Tụrụ mgbe otutu: esi mee ka akpụkpọ ezigbo home
11 ụzọ tufuo nke otutu ndammana
Dị ka ndị ihu na-enyere aka olive mmanụ si otutu: mejupụtara nke ngwaahịa, Ezi ntụziaka, Egosi maka ojiji
Esi wepụ ihe otutu onya: nzọụkwụ site nzọụkwụ ndu, foto, ọkachamara ndụmọdụ
Home/Acne/Olee otú iji tufuo nke otutu scars: agaghinihu tụrụ na ihu?
0 28 4 nkeji na-agụ
nwaanyị – ọdịdị nke ihe e kere eke,
isi iyi nke ike ya bụ creativity.
Chọrọ tufuo nke stains, scars na otutu scars mgbe onwe gị?
Hello, hụrụ n'anya na-agụ akwụkwọ nke blog!
Anyị ga-anọgide na mkparịta ụka anyị na isiokwu nke post-otutu (esi nke na pustules). taa, anyị ga-agwa, otú tufuo nke otutu scars n'ụlọ na-ekekọrịta na Ntụziaka kasị dị irè masks. na, anyị ga na-ekpughe ihe nzuzo, Olee otú iji zoo flaws na ntecha.
Isiokwu anyị ga-enyere gị aka tufuo nke ezughị okè! Nọnyere anyị na-enwe na-agụ.
Ọtụtụ ezi ụzọ nke igbu ndị stains na scars
Olee otú ime ka a nkpuchi nke post-otutu home?
Mbufụt nke anụ na-mgbe na-eme ka anyị wetara mmetụta. karịsịa, mgbe ha na-eme nwere nsogbu, na-ahapụrụ a "na-echetara" n'ụdị scars ma ọ bụ indentations n'akpụkpọ. Anyị na-agbalị ike tufuo ya. taa, anyị ga-eso gị Atụmatụ, nke ga-enyere gị aka iji wepụ scars n'ụlọ.
O nwere ike iyi, na onwe-ọcha post-otutu - ọ gaghị ekwe omume. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na oge na-amalite ịrụ usoro - ihe niile kwere omume, n'ihi ọhụrụ scars wetara ọtụtụ mfe!
Irè ụzọ nke mbenata scars:
Magburu onwe dịghịrị na post-otutu ịchọ mma wax. Method nke ngwa bụ nnọọ mfe: umi agbazenụ, pointwise etinyere na wepụrụ mgbe ihicha. Mgbe ahụ jide n'aka na itinye a moisturizing ude.
Ị nwere ike ịzụta ya ebe a .
Bleaching - a oké ụzọ wepu afọ tụrụ, mee scars. I nwere ike ime nke a site na iji pụrụ iche ntecha, na iji masks, ị nwere ike mfe ka n'ụlọ.
Ezi ntụziaka creams, scrubs na masks i nwere ike ịgụ na na njedebe nke isiokwu a. Bleaching-enyekwara ọbụna si akpụkpọ ụda, eme ka ọ na-eji ire ụtọ, velvety.
Ịhịa aka n'ahụ na ịchọ mma mmanụ. The uru nke ọdịdị ihu ịhịa aka n'ahụ nwere ike ịgwa ndị mmadụ n'akwụsịghị akwụsị! Mgbe niile, ọ na-enyere iji nwayọọ na-aka nká, Ọ-aj u na dermis, smoothes akpụkpọ. The ịchọ mma mmanụ, ị nwere ike tinye 1-2 tụlee nke ether.
n'ihi na ihe atụ: 1 teaspoon almond mmanụ na 2 tụlee nke tii osisi mmanụ, eucalyptus, rosemary. Mma n'anya mmegharị ete ngwakọta n'elu ịhịa aka n'ahụ edoghi.
The mejupụtara nke mmanụ, dị ka ị maara, nnọọ uru, bekee, na nkejikotara ether mee ngwangwa metabolism, mee ngwangwa imu nke mkpụrụ ndụ na larịị epidermis.
Darsonval ngwaọrụ - ga-enyere gị aka wepu stains. N'ihi nta electric ịtụnanya, ọ nlezianya na-arụ ọrụ na dermis. pulses, site nozzles, abịa epidermis. Mgbe ahụ bacteria na-egbu, doo mbufụt.
Darsonval nwekwara accelerates ọbara. Ịhazi ojiji ebelata metụtara nke scars, scars. Ọzọkwa mma na ọnọdụ nke dermis dị ka a dum, amalite usoro nke imu-ọzọ na, activates mmepụta nke nsụkọta, elastin, gilaurona.
Nchikota na creams, lotions, scrubs - ị ga-enweta a ebube mmetụta! ohere Buy ngwa Darsonval .
Ọ bụ uru na-eme ka lotions na cider mmanya na lemon. Ọ bụghị nanị na whitens, ma na-akwalite ngwa ngwa na-agwọ ọrịa nke anụ ahụ, accelerates imu, smoothes na epidermis, Ọ na-enye ekwedo.
gị vitamin, karịsịa, A na S. ọmụmụ na 2 nke ọnwa. Ha na-enyere aka mma akpụkpọ ọnọdụ. nwekwara, aṅụ zuru ezu mmiri.
Chebe gị akpụkpọ si UV ụzarị -inache ga-etolite ọchịchịrị tụrụ, na, ọlị, chọọ anya. karịsịa, ma ọ bụrụ na ị na-eme acid peels ma ọ bụ jiri mkpa mmanụ nke oroma, lemon, mkpụrụ osisi grepu.
echiche, Atụmatụ ndị dị nnọọ mfe! Bịara n'Ezi Oge nnabata nke ọgwụgwọ - bụ isi ihe na-aga nke ọma, ekweta? N'ụlọ, ị nwere ike tufuo post-otutu.
Ị ga-achọ iji ẹdude ọgwụgwọ mmadụ, Rụtụ aka na online store ahịa ọgwụ ahụ ụdị Pharmacosmetica .
N'ezie, ma ọ bụrụ na a siri ike ikpe: miri scars, nwere unhealed mbufụt, na subcutaneous mmụta - ọ bụ uru ileta a dematọlọjist. Mmetụta kwesịrị naanị gwọọ epidermis, dịghị anya ihe ịrịba ama nke mbufụt na suppuration.
Nzuzo nke a anam-elu, ga-enyere gị zoo scars:
Tee na akpụkpọ primer, ọ ga-enyere ka mmezi enyemaka.
n'ihu, eji a pụrụ iche ahịhịa ma ọ bụ ogbo Tee concealer. Ọ dịghị mkpa na-eme ka mkpuchi bụ oke oké! Ọ nwere ike clog pores na ime ọnọdụ.
Na mebiri emebi ebe, tinye concealer, ọ ga-enyere ha aka igbanwe
Zoo nācha ọbara-ọbara enyemaka green concealer, ọ bụ n'ụzọ zuru okè ọdịdị. Etinye ya ga-dotted na a ahịhịa.
Idozi ntecha eji ntụ ntụ.
Cheta na-achị: ọ dịghị mkpa ka igbunye anya ma ọ bụ egbugbere ọnụ. Ọ dị mma na-eme ka a obere olu okwu na iku anya, egbugbere ọnụ kwesịrị lipstick ma ọ bụ gloss ndo nyudovogo, anya nwere ike mee ka a obere nwa pensụl.
Always iji quality, nwalere ntecha , nke na-adịghị eme ka allergies.
E nwere ndị magburu onwe ụlọ ọrụ, na i nwere ike esi nri n'ụlọ. Ha ga-enyere gị aka dochie itching, ma mee ngwangwa ọbara na imu. Ị ga-achọpụta, akpụkpọ ga na-enwu na ịma mma na ahụ ike.
ọtụtụ ihe, na-echeta - na-eme ka masks, bee na ide ude kwesịrị ịna-, ma ọ bụghị n'ihi nke usoro agaghị.
Ị ga-enwe ndidi, dị ka o kwesịrị na-emepụta ezu collagen, onye ga-enwe ike jupụta na mebiri emebi ebe. Ịchọ mma ngwaahịa ga-bụghị naanị enyemaka tufuo scars, kamakwa iji gbochie ihe otutu.
Masks nke ụrọ na mgbakwunye na nke ethers aka mma akpụkpọ ọnọdụ, mee ngwangwa imu. Ọ dị ezigbo mkpa, na-emepụta collagen na elastin. Mgbe niile, ndị a abụọ ọcha bụ maka na ekwedo anyị akpụkpọ.
esters (rosemary, lavender, manuka, lemon) bụghị naanị mee ngwangwa ọbara, ma na-akwalitekwa ngwa ngwa na-agwọ ọrịa nke post-otutu.
Clay - nro, Ọ na-asachapụ na pores na moisturizes. Tinye mmanụ na a na-acha ọcha ma ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ụrọ ka nwayọọ - ga-ezu 1-2 tụlee.
Honey na cinnamon - ka a adụ dermis, silky, zụọ na moisturize. Honey - ihe ịtụnanya ngwaahịa, nke na-erite uru site na a ọnụ ọgụgụ nke ọrịa na a na-eji n'ihi ịchọ mma nzube. Cinnamon - tọọ elu akpụkpọ, Ọ gbapụrụ ọsọ elu metabolism.
ịchọ mma ice - ọ dị mfe iji kwadebe! Ọ dị mkpa na-pasili, finely iri ya (ma ọ bụ iri na a blender) wụsa esi mmiri, ka ọ na ime biya, wukwasi n'ime a pụrụ iche, n'ihi na ice. Nnọọ uru na-ehichapụ ihu na ice na ụtụtụ na mgbede. Ụtụtụ - a usoro ị bụ'abụ, mgbede - inyeaka ike ọgwụgwụ na nchegbu mgbe ọrụ.
Badyaga na hydrogen peroxide - irè usọbọ, nke na-enyere ka mmezi akpụkpọ, kpochapụ mbufụt na aka itching. Ntụziaka nkpuchi mkpokọta: 1 ụrọ ngaji, 1 ngaji na concoctions 4 tụlee nke hydrogen peroxide 3%.
Họrọ ndị kasị ị mmasị nkpuchi nke post-otutu na-eme ya kwa ụbọchị. Ọ bụkwa uru na-agụnye ya na-elekọta rubbing ice na paraffin. Mgbagwoju ọgwụ na iji nlezianya na nlekọta anụ-enyere gị aka ịnagide ihe ịrịba ama nke otutu.
Jiri organic ntecha , akwaa mgbagwoju vitamin .
ma ọ bụrụ na, Mgbe 2-3 ọnwa ị ga-achọpụta anya mgbanwe, ị kwesịrị ịkpọ a dematọlọjist ma ọ bụ beautician. -Elekọta onwe gị, elekọta akpụkpọ niile oge - na ọ ga-ekele gị!
Ịzụ ihe na-echegbu niile isiokwu nke otutu, anyị ga-amụta banyere ndị na-akpata ha dị, na-emeso ha na onye na-akpọ maka enyemaka.
akpatre, taa zutere na ụzọ, esi merie post-otutu n'ụlọ. Ezi ntụziaka masks diversify gị onwe-elekọta ma na-eme ka akpụkpọ ire ụtọ na silky.
Cheta - na ị mara mma!
Denye aha na blog, na-abreast nke niile ọhụrụ ngwaahịa site n'ụwa nke ịma mma, ahụ ike na creativity.
Akọrọ ndị ọzọ na ndị enyi gị, n'ihi na okwu a bụ nke nchegbu na ọtụtụ.
Lee ị anya!
Ebe ọ bụ na ị bụ Ilona
Ọ bụrụ na isiokwu a bụ aka gị, ekele maka ya - ìhè obi)))
Olee otú wepụ n'ichihịa si otutu na ihu: ọgwụ na ahụ ike na omenala ụzọ
Folk ịgba akwụkwọ maka otutu - 10 Irè Ezi ntụziaka maka home
22 Board Olee otú ngwa ngwa tufuo ihe otutu na ihu gị n'ụlọ
Olee otú iji tufuo nke otutu maka 24 elekere
Olee otú iji tufuo nke otutu scars na otutu, Medical akwụkwọ nkà
Olee otú iji wepu post otutu na ihu: tụrụ na scars, nnyocha 4 ọma n'aka
Olee otú iji wepu stains si otutu na ihu
14 dị ka ihe niile n'ụzọ nke ịlụ Bibie ihe otutu scars mgbe
Olee otú iji tufuo nke scars mgbe otutu?
Olee otú iji tufuo nke otutu na ihu gị n'ụlọ
Olee otú wepụ metụtara nke etuto na ihu ya - red tụrụ, scars